Microsoft inounza Kids Mode yevashandisi vese veEdge: Maitiro ekuigonesa
Muri pano: musha / System Admin / Windows / Microsoft inounza Kids Mode yevashandisi vese veEdge: Maitiro ekuigonesa
Microsoft yakazivisa kuti iri kuwedzera iyo Kids Mode pane yayo Edge web browser kuti ive yakachengeteka kubhurawuza. Sekureva kwekambani, izvi zvichaita kuti vana vatarise pawebhu nenzira ine hushamwari, inogadziriswa. Iyo modhi parizvino iri kuburitswa muUS Chirungu pane ese ari maviri Windows uye macOS.
Iyo itsva Kids Mode ichawedzera dzinoverengeka dze "kuchengetedzwa kwekuchengetedza" kuona kuti vana vanoongorora internet vane chiitiko chisina kukuvadza. Ichaisa Bing SafeSearch ku 'solid' nekumisikidza, inowedzera madingindira etsika, inopa zvemukati zvine ushamwari uye inoseta password yakadzivirirwa yekubuda.
Cherechedza: Microsoft Edge vashandisi havafanirwe kuve neakaundi account kana chimiro kuti vawane Vana Mode.
Maitiro ekugonesa Vana Mode
Open Microsoft Edge uye tinya pane iyo icon icon iri pakona yekuruboshwe kumusoro padivi pekutsvaga bar.
Sarudza iyo 'Bhurawuza muVana Mode' sarudzo.
Sarudza zera rakakodzera kubva pane zvingasarudzwa: makore mashanu kusvika pamasere uye mapfumbamwe zvichikwira.
Iyo Kids Mode ikozvino ichavhura pane yako webhu browser.
Kuti ubude, tinya icon yeVana Mode iri mukati mebhawa repamusoro.
Sarudza iyo 'Exit Kids Mode' sarudzo.
Pinda yako Yekushandisa ID password kuti ubude.
Iwe unogona zvakare kuseta chaiwo mawebhusaiti ayo vana vako vanogona kushanyira kubva mukati me Windows Zvirongwa. Ikoko iwe unogona zvakare kugonesa mamwe emhuri-ane hushamwari maficha kubva ipapo.
Kunze kweizvi, Microsoft yakaburitsawo zvikumbiro zvekushandura. Iyi ficha yakagadziriswa nekudzidza huwandu hwevanhu kubva kune vese vashandisi veEdge browser vanobvumira Microsoft kutora data kubva kwavari. Nedatha iyi yese, kambani yakagadzira mamaki ekuona kuti ndeapi masayiti masayiti ane mhinduro isina kunaka kubva kuvashandisi uye ndeapi akawana mhinduro yakanaka. Izvi zvinobva zvabatsira mukumira kuratidza zvikumbiro zvekuzivisa kubva kune mamwe mawebhusaiti ayo vamwe vashandisi vasingade kuona.
Ose maviri maficha aya akaburitswa kunze ne Microsoft Edge 88 Yakagadzikana kudzoreredza. Unogona kugadzirisa kune iyi vhezheni kubva ku Windows Gadziridza pani.
Yakazara Kugadzirisa: Microsoft Edge hwindo nzvimbo nyaya
Sei KuTenderedza Sync Pane kana Kupa MuNew Microsoft Edge
8 Yemahara Pamhepo Dzidzo Mitambo Yevana
Filed Under: Windows Tagged With: Microsoft Edge, Microsoft Windows, Web browser, Windows Update